विमानस्थलको आलोचनाको अर्को विषय धावनमार्ग पनि हो । वेलावेला पिच उप्कनेदेखि जनावर र चराको आतंक यहाँ सामान्य मानिन्छ । तर, अहिले धावनमार्गमा कुनै समस्या नरहेको विमानस्थल व्यवस्थापन दाबी गर्छ । ‘त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको कुनै पनि संरचनाका कारण जहाज दुर्घटनामा परेको देखिँदैन,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, अनुमानको भरमा बोल्नुभन्दा उच्चस्तरीय दुर्घटना जा“च आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु राम्रो हुन्छ ।’
युएस–बंगला एयरलाइन्सका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार जहाज दुर्घटनामा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)को हात रहेको आरोप लगाइएको छ । एटिसीले समयमा उचित सूचना दिन नसक्दा पाइलट झुक्किएको युएस–बंगला एयरलाइन्सको दाबी छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार एटिसीले दिएको निर्देशन सही पालना भएको भए पूर्वनिर्धारित समयमै सुरक्षित अवतरण सम्भव थियो । एउटा दिशाबाट अवतरणको अनुमति दिइसकेपछि पनि अर्को दिशातर्फ मोडिनु, आकाशमा छ“दा कुनै इमर्जेन्सी घोषणै नगरी अवतरणका लागि तयार भएपछि एटिसीले थप निर्णय लिने मौका नपाएको महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए ।
नेपाली आकाशलाई असुरक्षित देखाउँदै सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियनले नेपाली वायुसेवालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । एभिएसन सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची)मा राखेको युनियनले यसै वर्ष नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउने अपेक्षा थियो । तर, नेपाली भूमिमा भएका ठूला दुर्घटनापछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक भन्छन्, ‘यो बंगलादेशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएको जहाज हो, त्यसकारण जा“च आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै मूल्यांकन गर्दैनन् ।’
कमजोर सुरक्षा, भद्रगोल उद्धार
दुर्घटनाको १० मिनेटसम्म दमकल पुगेन, पछि सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि धावनमार्ग पार गरे
जहाज धावनमार्ग छाडेर पूर्वी–दक्षिणतर्फको घाँसेमैदानमा जोतियो । जहाजबाट आगो र धुवाँको मुस्लो छुट्यो । त्यसको १० मिनेटपछि नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुगे । तर, उद्धार रफ्तारमा हुन सकेन । सुरक्षाकर्मी आपसमा अलमलिरहेका देखिन्थे । उद्धारमा खटिएका नै अलमलमा परेपछि दुर्घटनापछिको परिस्थिति भद्रगोल बन्न पुग्यो । दुर्भाग्यवश ५० यात्रुले
ज्यान गुमाए ।
तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा गार्ड प्रमुख एसएसपी प्रेम चन्द उद्धारमा भद्रगोल भएको स्विकार्न तयार छैनन् । कुनै कसर बाँकी नराखी उद्धार गरिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘दुर्घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका हुन् । दमकलले आगो निभायो । अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थलाई आगोले टिप्ने डरले विशेष खालको ‘फम’ प्रयोग गरियो, घाइतेलाई
जगेडा सुरक्षाकर्मी छैनन्
विमानस्थलमा नियमितबाहेक आकस्मिक सुरक्षामा खटाउन जगेडा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था छैन । त्यसैले सोमबार नियमित सुरक्षामा खटिने २५ सुरक्षाकर्मीलाई दुर्घटनास्थलतर्फ खटाइयो । त्यसपछि मात्रै उद्धारका लागि थप सुरक्षा बल माग गरिएको थियो ।
एसएसपी चन्दले भने, ‘यहाँ रहेका २० देखि २५ सुरक्षाकर्मी तत्काल दुर्घटनास्थलमा खटाइयो । थप सुरक्षाकर्मी त्यसपछि मागिएको हो । त्यसवेलासम्म सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी पनि घटनास्थल आइसकेका थिए । सबै गरी करिब ३ सयको संख्यामा सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका थिए ।’
विमानस्थलको प्रत्यक्ष सुरक्षा नेपाल प्रहरीको कमान्डमा छ । विमानस्थलभित्रको सम्पूर्ण सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहन्छन् । यसका लागि नेपाल प्रहरीको मात्रै ३ सय ७ दरबन्दी छ, कमान्ड डिआइजीले गर्छन् । विमानस्थलको यो नियमति सुरक्षा संयन्त्र हो । यो संयन्त्रमा चौबिसै घन्टा सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्छ । त्यसैले यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई झिकेर अन्त लैजान सकिँदैन । अत्यावश्यक परे बाहिरैबाट थप सुरक्षाकर्मी माग्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थल सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी पनि हुन्छन् ।
युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन पाँच दिन लाग्ने भएको छ ।
फरेन्सिक मेडिसिन विभागसँग सीमित स्रोत–साधन भएकाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएको हो । सबै मृतकको सनाखत गर्न शव महाराजगन्जस्थित फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ ।
फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रा.डा. हरिहर वस्तीले सीमित स्रोत–साधनबीच काम गर्नुपर्ने भएकाले रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्ने बताए । विभागमा भएका १३ कर्मचारीले सोमबार रातिदेखि निरन्तर पोस्टमार्टमका लागि नमुना संकलन गरिरहेका छन् ।
डा. वस्तीका अनुसार सोमबार रातिदेखि मृतकको हुलिया र जाहेरीसहितको विवरण बुझ्ने काम भइरहेको छ । विवरण बुझ्ने, पोस्टमार्टम गर्ने र परिवारका सदस्यलाई शव बुझाउने प्रक्रिया भएकाले केही दिन